Human Resource Management Directorate – SRS Audit General
Shaqooyinka ugu muhiimsan ee uu qabto Agaasinka Maamulka Horumarinta cududda shaqaale
Wuxuu dabagal ku sameeya islamarkaana u sax ahaantooda u xaqiijiya siyaabaha iyo xalaadaha shaqo ee shaqaalaha dawladdu ay ku helayan damaanad shaqo islamarkaana lagu ilaalinayo iyo sidoo kale wuxuu dabagal ku sameeya arrimaha la halmaala wajibaadyada shaqaalaha looga baahan yahay inay guutan.
Wuxuu xaqiijiyaa islamarkaana suurtogaliyaa in shaqaaleysiinta, dallacsiinta, bedelaada, mushahar korodhka iyo fursadaha waxbarasho ay ku saleysan yihiin heerka waxbarasho, waayo-aragnimada khibradda xirfadeed ee shaqada iyo waxqabadka shaqo oo kaliya;
Si cadadka mushaaharaadku u uu noqdo mid ku saleysan nidaamka booska shaqo ayay taabogalin mabda’ odhanaya booska isku midka ah waa in lagu bixiyo mushahar is le’eg.
Shaqaalaha xafiiska inta loo darso tababarada kala duwan ee xaqiijinta /kobcinta kartida shaqo ayay u horseedi sidii shaqaalaha loogu tababari lahaa;
Isagoo daraasad iyo cilmi baadhis ku sameynaya caqabadaha xirfadlayaasha iyo shaqaalaha xafiiska ka haysta dhinacyada shaqada hanti-dhawrka iyo qaab socodka shaqo ayay talo-bixin ka siin islamarkaana sidii loo siin lahaa ay ja’wiga ku habboon suurtogalin.
Hab waafaqsan bayaanka dib loo habeeyay ee aasaaska xafiiska ayay kaalintooda ka gaysan sidii loo diyaarin lahaa xeerka maamulka shaqaalaha xafiiska,
Hab waafaqsan xeerka maamulka shaqaalaha xafiiska ayay dabagalaan diyaarinta iyo hirgalinta, fulinta arrimaha shaqaalaha; sida shaqaalaysiinta, caydhinta, fulinta, dallacsiinta, hannaanka fulinta xuquuqaha iyo fa’iidooyinka, hannaanka soo jeedinta cabashooyinka, awaamiirta nidaamka anshax-marinta.
Waxay diyaariyaan/habeeyaan faylka shaqada iyo shaqaalaha ee xafiiska, waxay qorsheeyan islamarkaana fuliyaan hawlaha xusuus dhawrka iyo maareynta diiwaanada; waxay taabogaliyaan arrimaha lama huraanka u ah arrintani.
This is a huge advantage because you are only allotted 40 minutes to domyhomework.co.uk/ compose your essay.